LG Optimus L3 hatramin'ny 159 euro any Espana | Androidsis
LG Optimus L3, finday avo lenta antonony amin'ny vidiny tena manintona
Na dia napetraky LG aza ny artillery teknolojia rehetra ao amin'ny sehatry ny finday avo lenta, mila jerena fotsiny ny LG Optimus 2X, 3D tsara indrindra na ny vao haingana indrindra Optimus vu, ny orinasa koreana koa dia te hanafika ny sehatry ny finday avo lenta.
Ary hataony amin'ny alàlan'ny LG Optimus L3, smartphone finday avo lenta izay Tsy ho ela dia ho tonga any Espana amin'ny vidiny mirary tokoa: 159 euro maimaim-poana. Avia, nify mamy ho an'ireo izay te hiditra amin'ny tontolon'ny Android amin'ny vidiny mihena.
Mihomehy ny fampiasa azy raha ampitahaina amin'ny biby toy ny tsitoha Samsung Galaxy S II fa mihoatra noho ny ampy hijerena ny mailakao, hivezivezy amin'ny Internet ary, maninona raha tsy izany, ento ny lalao ratsy amin'ny lalao an-jatony maro ho an'ny Android.
Ho an'ity, ity terminal ity manana efijery 3.2-inch, miaraka amin'ny kalitaon'ny QVGA sy famolavolana izay manaraka mazava tsara aorian'ny rahalahiny lehibe kokoa. Mikasika ireo fepetra arahana ara-teknika azy dia milaza aminao fa ny LG Optimus L3 dia hanana p800MHz processeur ary fahatsiarovana anatiny 1GB, azo ovaina amin'ny alàlan'ny karatra Micro SD, ho fanampin'ny fakantsary 3 megapixel.
Araka ny efa noresahintsika teo aloha, ny LG Optimus L3 dia hikapoka eo ambanin'ny sehatra Android, miaraka amin'ny Android Gingerbread . Misalasala be aho fa ity terminal ity dia navaozina tamin'ny Ice Cream Sandwich, fa na izany aza hitako ho safidy mahaliana tokoa ny mandinika. Ary vao mainka aza izany ankehitriny fa hijanona ny famatsiam-bola amin'ny telefaona ireo mpandraharaha ...
Loharano - LG
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » LG Optimus L3, finday avo lenta antonony amin'ny vidiny tena manintona
Nahatratra 99 euro tao yoigo aho
iep dia hoy izy:
chema mangatsiaka dia hoy izy:
Ratsy kokoa tsy azo atao.
Mamaly an'i chema frassy
Sony dia mahatsikaritra ny tsy fahombiazana amin'ny efijery sasany an'ny Sony Xperia S
Nandresy tamin'ny ady tamin'i Hasbro i Asus